Baking mat Factory |China Baking Mat Manufacturers, Suppliers
Shina OEM Shina S235 S355 Ss400 A36 A283 Q235 Q345ms Plate / Taratasy vy mihodinkodina mafana / Plate vy mainty
TSARA HO AN'NY EFA KELY: Ny fanamboarana silikônika malefaka sy malefaka dia mamela an'ity tsihy mihodinkodina na miforitra kely ity, tonga lafatra amin'ny fitehirizana eny amin'ny toerana kely toy ny vatasarihana lakozia, trano fonenana, RV, na lasy.
FAMPIASANA BE DIA: Mahatohitra hafanana (hatramin'ny 450º), mamela anao hampiasa azy io ho toy ny trivet, mba hiarovana ny countertops sy ny latabatra amin'ny vilany mafana na fitaovana, na ho toy ny vata fampangatsiahana.izy io koa dia avo roa heny ho toy ny trivet mahatohitra hafanana ho an'ny latabatrao sy ny countertop, tonga lafatra ho toy ny tsihy biby fiompy, vata fampangatsiahana, liner kabinetra.Fampiasana be dia be, ho gaga ianao fa niaina tsy nisy azy.
Mofo tsy miraikitra amin'ny kalitao avo lenta azo ampiasaina amin'ny fanaovana mofo vita amin'ny silicone
Ity tsihy ity dia lovia vita amin'ny macaron vita amin'ny silicone tsy misy BPA - vita amin'ny silicone kilasy sakafo sy fibre vera nohamafisina, vulcanised ho mavo aorian'ny hafanana 4 ora, ity lovia fanaova macaron ity dia mahatanty hafanana hatramin'ny 480℉ tsy misy fofona na setroka.
Anaran'ny vokatra: Silicone fiberglass tsihy ho an'ny lafaoro
Habe: afaka custom
Fampiasana: Mofomamy mofomamy, mofomamy, sns.
Vidin'ny singa: 0.9 – 3.6 USD
Ambongadiny Silicone Baking Mat Non Stick Rolling Daugh Mat misy fandrefesana
Ny tsihy fanaova-mofo dia vita amin'ny silicone kilasy sakafo, manao ny mofomamy amin'ity tsihy ity, dia hamonjy asa be dia be ianao ary hiala voly.Ny silicone pastry tsihy dia azo antoka, mateza, endrika tsara tarehy & kalitao Premium.Ity tsihy silicone ity dia mahatanty ny mari-pana avy amin'ny -30 ka hatramin'ny 480 ° F. Ary koa, ny tsihy fametahana dia misy faritra tsy miraikitra, mety amin'ny ambaratonga samihafa amin'ny koba mipetaka ary tsy dia mikiakiaka.
Microwave Safe 30 Cavities Heart Shape Molding Sheet Chocolate Reusable Silicone Macaron Baking Mat
Silicone Safe Premium: Manome lanja lehibe ny fahasalaman'ny mpanjifanay izahay.Noho izany dia manolotra ny silikôn'ny sakafo premium izahay mba hiarovana ny fiarovana anao.
Ity silicone baking mat ity dia tena tsara tsy miraikitra.Ary mora ny manadio amin'ny lamba.
Easy Clean Nonstick Silicone Sheet Silicon Pyramid Baking Mat
Azo sasana sy azo ampiasaina indray: Ny tsihy fandrahoan-tsakafo mahatanty hafanana ho an'ny fampiasana lafaoro dia azo fafana madio amin'ny rano savony na apetraka eo amin'ny fitoeran'entana ambony amin'ny fanasan-damba, manamora ny fanadiovana sy ny fampiasana indray amin'ny sakafo maraina, antoandro, na sakafo hariva.
Tsy mila taratasy parchment intsony ary aza mandany fotoana lava manadio lovia fanaova, ny tsihy silicone dia manamora ny fandrahoan-tsakafo tsy tapaka anao!
Kitapo vita amin'ny koba vita amin'ny fiberglass lafaoro lafaoro fanaingoana pad cookie liner macaron silicone baking mat
Na ny miforitra: Collapsible.
Serivisy manokana: Manome serivisy manokana dia ahitana: fanontam-pirinty logos, lamina fanontana, loko mahazatra.
Tsy miraikitra lehibe tsy miraikitra Baking Pizza Pie Rolling Kneading Dough Mats Silicone Pastry Mat misy fandrefesana
Miaraka amin'ny fandrefesana - Fandrefesana santimetatra sy santimetatra, manampy anao hanao koba habe tonga lafatra;
Mihodina ho an'ny Easy Storage.